China 1,6-Hexanediol ụlọ ọrụ na-emepụta | Zhongrong
1, 6-hexadiol, nke a makwaara dị ka 1, 6-dihydroxymethane, ma ọ bụ HDO maka nkenke, nwere usoro ngwanrọ nke C6H14O2 na ịdị arọ nke 118.17. N’ime ụlọ ụlọ, ọ bụ ezigbo waxy siri ike, na-agbaze na ethanol, ethyl acetate na mmiri, ma nwee obere nsị.
Usoro Molekụl: C6H14O2
Ahịa: Teknụzụ Zhongrong
Mmalite: Tangshan, Hebei
Molekụla ibu: 118.17400
Njupụta: 1.116 g / ml (20 ℃); 0.96 g / ml (50 ℃)
Ihe omimi: 20 ℃ - ọcha waxy hygroscopic siri ike; 50 ℃ - Piel mmiri mmiri
Ọnọdụ nchekwa: ≤30 ℃ (nchekwa nchekwa dị ala)
Nkọwapụta ngwaahịa: GB / T 30305-2013 Ngwaahịa magburu onwe ya
Omenala Code: 2905399090
Mbukota nkọwa: gbọmgbọm / nnukwu (ton)
Njirimara anụ ahụ
Ọdịdị nke 1, 6-hexadiol nwere ngalaba hydroxyl abụọ bụ isi nwere nnukwu ọrụ, nke na-eme ka ọ dị mfe ịmeghachi na acid acid, isocyanates, anhydride na acids ndị ọzọ iji mepụta ụdị nkwekọrịta dị iche iche.
1, 6-hexadiol bụ ezigbo kemịkalụ kemịkalụ, nke a na-ejikarị emepụta monomer na-arụ ọrụ nke mkpuchi mkpuchi ọkụ, polycarbonate polyol na polyester ụlọ ọrụ. mkpuchi, mkpuchi mkpuchi, mkpuchi ntụ ntụ); Sịntetik ọgwụ, na-esi ísì ụtọ intermediates 1, 6- dibromohexane na ubi ndị ọzọ.
1, 6-hexanediol ka a ga-etinye n'ime ngwongwo ígwè nke ihe siri ike 200L. A ga-ejikwa polyethylene ma ọ bụ mgbanaka na-enweghị agba na-ekpuchi ya iji gbochie ya. mezuo ihe ndị a chọrọ.
Anya maka nchekwa
Lọ nkwakọba ihe kwesịrị ịbụ ihe dị jụụ, akọrọ, ikuku, ihe na-enye ọkụ, ihe ọkụkụ na-arụ ọrụ nke ọma ka ha mebie emebi. ọnụ ụzọ na Windows, a ga-ehichasị shelf mgbe niile iji mee ka ọ dị ọcha. A na-emechi mkpọchi ahụ ma dị mma, enweghị mmiri na mmetọ. agwakọtakwala nchekwa n'ụlọ nkwakọba ihe ahụ nwere ọkụ ọkụ, eriri ọkụ, egbe egbe na ọkụ ọkụ mmiri ndị ọzọ.
Nchedo ationgbọ njem
Ọ ga-ebugharị site n'ụgbọ ala nke nwere iruzu ụgbọ njem kemịkal; Ndị ọkwọ ụgbọ ala na ndị escort ga-enwerịrị iru eru zuru oke na ikikere zuru ezu. Transportgbọ njem ndị a ga-eji ụdị dịgasị iche iche na nke ọkụ ọkụ na ngwa ọgwụgwọ ngwa ngwa maka ịlaghachi. na itinye ihe ahụ kwesịrị ịdị mma mgbe ebubara ya.Jide n'aka na ihe mgbochi anaghị awụfu, daa, daa ma ọ bụ mmebi n'oge njem. Ejikọla ya na oxidant, belata ihe, acid chloride, anhydride, chloroformate. N'oge njem, zere ọkụ, ọkụ na mpaghara okpomọkụ dị elu n'oge a na-egbochi ya.Machibidoro iji akụrụngwa akụrụngwa na akụrụngwa nwere ike ịmị ọkụ. transportgbọ njem n'okporo ụzọ kwesịrị ịgbaso ụzọ achọrọ, ghara ịnọ ebe obibi na ebe ndị mmadụ bijupụtara.
Nchekwa: Hdị ihe egwu GHS: Dịka usoro GB30000 nke Chemical Classification na Labeling Specification, ngwaahịa a bụ nke 2B nke nwere oke nhụjuanya anya / anya mgbakasị anya.
Nke gara aga: Ethyl Acetate （≥99.7%）
Osote: 75% Mmanya Na-egbu Mmanya na IBC / Drum